-Dhacdo China Mini Round Bluetooth 5.0 TWS Dhagaha-dhegaha Waxsoosaarka iyo Warshada |Roman
Chipset Bluetooth: JL6976 V5.0
Waqtiga Muusiga: qiyaastii 3-4H
Waqtiga hadalka: qiyaastii 3-4H
Waqtiga heeganka: 80H-100H
Ku dallaca batteriga sanduuqa: 180mAh, baytariyada madaxa: 25mAh
Dhagaha Dhagaha ee Wireless True Bluetooth 5.0: Dhagaha Dhagaha ee Wireless-ka waxa uu qaataa tignoolajiyada sareeysa ee Bluetooth, Kaas oo bixin kara isku xidh cad, degdeg ah oo siman, gudbin kara qallooca eber iyo raadadka maqalka ee aan lumin, Busyada Dhegaha Wireless-kayaga waxay taageertaa Kaaliyaha Codka oo ay ku jiraan Kaaliyaha Google ama Sri.
Xakamaynta taabashada casriga ah si loo fududeeyo hawlgalka
dalool dallaca iftiinka si ay u taageerto dallacaadda degdega ah.
qaanso wareegsan waxay u hoggaansantaa naqshadda ergonomic, mana dhaawacayso muddo dheer in la xidho dhegaha dhegaha ee TWS.
Super Bass Sound &Ergonomic Design:Taleefannada dhegaha ee Stereo Wireless-ka ayaa leh Function Super Bass, waxay kuu keeni doonaan Muusig Cod Tayo Sare leh iyo Taleefan;Naqshadaynta Dhegaha Gudaha ee Ergonomic oo leh 3 Xajmi oo kala duwan oo Koofiyadaha Dhegaha ah ayaa siinaya taam ku habboon Nooc kasta oo Dheg ah, waxayna abuurtaa Shaabad Wanaagsan oo loogu talagalay Go'doominta Sawaxanka La Wanaajiyey.
Taleefannada dhegaha-dhegaha ee bluetooth-ku waxa ay ku siin karaan 3-4 saacadood oo waqti/wakhti hadal ah markiiba, iyo kiis dallacadu waxa uu leeyahay bandhig koronto.Waad garan kartaa marka aad wax dallacanayso wakhti kasta.
Hal badhan ayaa maamula dhammaan dhinacyada dhegaha-dhegaha
Sida loo isticmaalo dhagaha dhagaha ee wirelesska?
Taabo-kaliya bidix ama taleefoonka midigta: Ciyaar/hakid,Jawaab/Hakin;
Laba jeer taabo: Taabasho dhegta bidix -->dib u bood,
Taleefoonka dhegta midig --> horay u bood;
Saddex-taabasho: Taabasho dhegta bidix -->mugga hoos,
Taleefoonka dhegta midig->mugga hoos ayuu u dhacayaa;
Riix taleefoonka dhegta midig ee bidix ama midig 3 ilbiriqsi: Siri firfircoon
Maxaa ku jira xirmada?
1 x Dhegaha dhegaha ee Bluetooth
1 x Xadhkaha Dabaysha
Hore: AirPods oo leh Kiis Dallacaadda Wireless-ka ah
Xiga: Dhagaha-dhegaha ciyaaraha ee Wireless-latency hooseeya
Xakamaynta Dhagaha-dhegaha-yar ee Bluetooth-ka Taabasho Taabasho, ...
Bluetooth Mono Headset, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha, Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah, Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0, Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic,